Tryton 5.6 na mmelite na modulu, mbupụ, ntanetị yana ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga e kwupụtara ọkwa nke ụdị ọhụrụ nke Tryton 5.6, nke etinyere mmezi dị iche iche na modulu ndị ọzọ. Maka ndị na-amachaghị Tryton kwesịrị ịma nke ahụ jikọtara ngwanrọ njikwa (makwaara dị ka PGI ma ọ bụ ERP) bụ a general elu-larịị Mgbakọ ikpo okwu na atọ n'ígwé na ebumnuche izugbe nke etolitere azịza azụmahịa (ERP) site na modulu Tryton.
Ikpo okwu nke A na-ahazi Tryton na nhazi ụlọ atọ, nke edepụtara dị ka ndị a:
Desktọpụ - Onye ahịa Tryton
Weebụ - Ihe nkesa Tryton
Ederede - Ebe nchekwa data nke nwere ike bụrụ PostgreSQL ma ọ bụ SQLite.
Ngwa a na-abịa na otu ihe karịrị otu narị modulu na-ekpuchi ọtụtụ mkpa azụmahịa (ịzụta, ahịa, ịkọwapụta ego, ngwaahịa, wdg).
Tryton ejiri ihe ndia na usoro:
Akaụntụ na nyocha nyocha
Njikwa ngwa ahịa
Ọrụ na njikwa oge
1 Kedu ihe ọhụrụ na Tryton 5.6?
2 Etu esi ewunye Tryton 5.6 na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Tryton 5.6?
Na ụdị ọhụrụ a, emere mgbanwe dị iche iche na modulu ngwa, yana ndị ọhụrụ.
N'ime ndị dị ugbu a, Emeputara ya na nzụta, ire ahịa na ụdị ndị ọzọ, agbakwunyere 'bọtịnụ njikọ, bọtịnụ ndị a na-egosi ọnụọgụ ndekọ nke jikọtara ha ma mepee echiche na ha.
N'oge mgbanwe na ịzụta, ire na mmepụta ihe, ijioge ọ ga - ekwe omume ịchekwa aha onye ọrụ gị maka ọrụ mgbanwe ndị a (atụmatụ, nkwenye, mmalite nke mmepụta, wdg), nke a na-enyere aka ịmata onye njikwa na ihe omume nsogbu.
Mgbe ọhụrụ modul kwukwara bụ ndị na-esonụ:
Nchịkọta ego: ọtụtụ mba ndị ọzọ dị na Europe na-enyefe ego ikpeazụ na ego ise, usoro a na-enye ohere ịkọwa site na ego a ga-emezu na njedebe ikpeazụ, ahịa na akwụkwọ ọnụahịa ndị ahịa nwere ngụkọta ha ma ọ bụrụ na nhọrọ ahụ bụ arụ ọrụ: ịzụrụ na akwụkwọ ntinye akwụkwọ nwere ike ịhazi ya dabere n'okwu ikpe.
Production nke onunu: a modul mezue usoro nke onunu maka ire, ọ na-enye ohere rụọ ọrụ a mmepụta iji kwa akara nke ngwaahịa rere; Ya mere, mmepụta ga-jikọrọ a kpọmkwem ire na-adịghị otu.
Mgbanwe ọzọ a na-etinye n'ọrụ na ụdị ọhụrụ a dị - Mbupụ CSV, n'ime ya ka agbakwunyere ọrụ ọhụrụ na na-enye ohere mbupụ niile ndekọ depụtara ọ ga-ekwe omume ịnweta URL echedoro jikọtara na mbupụ.
Na ndepụta ndị ahịa weebụ ugbu a nwere ngagharị na-enweghị ngwụcha, ihe mgbochi ọzọ nke ndekọ na-akpaghị aka na-ebujuru ahịa ya mere ya adịkwaghị mkpa pịa bọtịnụ "More".
Ọtụtụ emeela - ndozi na onu ahia onu ahia, ọrụ akpaka na-agụghachi ọnụ ahịa ihe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Tryton nwere ike iji WeasyPrint (ọ bụrụ na ọ dị ugbu a) maka ịtụgharị akụkọ na HTML ka usoro PDF, Weasyprint na-enye nsụgharị ka mma na nke a karịa LibreOffice, nke bụ ngwaọrụ ndabara.
Na mgbakwunye, enwere ike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ugbu a n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ na-akwụghachi ụgwọ site na Tryton interface, nke a na-egbochi inye ọtụtụ ndị ọrụ ohere na ngalaba Stripe.
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara nkọwa nke ntọhapụ ọhụrụ a, can nwere ike ịlele ndepụta zuru ezu nke mgbanwe Na njikọ na-esonụ.
Etu esi ewunye Tryton 5.6 na Linux?
Ngwa ahụ achọtara n'ime nchekwa nke ọtụtụ nkesa LinuxỌ bụ ezie na naanị nju bụ na ọ bụghị ihe niile ngwa e emelitere ọhụrụ version.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụ usoro nrụnye, ịnwere ike iji ngwanrọ ngwanrọ gị chọọ ngwa ahụ.
Nwere ike ịga na njikọ ọzọ ebe ị nwere ike nweta akwụkwọ na ndị ahịa maka sistemụ ndị ọzọ eji arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Tryton 5.6 nwere mmelite na modulu, mbupụ, ntanetị yana ihe ndị ọzọ
Ubuntu Touch OTA-12 na eze rutere ka "mmelite kasịnụ eweputara"